#Claude Puel ayaa sheegay in Eden Hazard uu u baahan yahay inuu ka tago Chelsea si uu ugu noqdo ciyaaryahanka adduunka ugu fiican. | Get Latest News From Horn of Africa |
Home Somali #Claude Puel ayaa sheegay in Eden Hazard uu u baahan yahay inuu...
#Claude Puel ayaa sheegay in Eden Hazard uu u baahan yahay inuu ka tago Chelsea si uu ugu noqdo ciyaaryahanka adduunka ugu fiican.
Wargeysyada qaar ayaa soo wariyay inuu diyaar u yahay inuu heshiis cusub u saxiixo Stamford Bridge, ka hor inta aysan Leicester u safrin Chelsea Sabtida, Puel ayaa ka walwalsaneyn mustaqbalka dheer ee Hazard.
Puel ayaa yiri: “Wuxuu doonaya in uu horumar ka sameeyo dhanka kubadda cagta, ma ogi inuu u baahan yahay inuu sii joogo Chelsea ama hadii kale in uu ka tago- waa dhibaato soo korortey ayey noqon dhankiisa?
Laacibka Chelsea Eden Hazard ayaa sheegay hal shuruud ku xiray qandaraaskiisa cusub ee kooxda Chelsea xili aad loola xiriirinayo in uu u dhaqaaqi doono kooxda Real Madrid.
Hazard ayaa ka dhawaajiyay in uu heshiis cusub la gali doono kooxda ka dhisan woqooyiga London hadii xidiga dhalashada ay wadaagaan ee Thibaut Courtois uu ka hor isaga qandaraas cusub la galo kooxda Blues.
Calaama su’aal ayaa la saaray mustaqbalka Hazard ee kooxda heysata horyaalka Premier Leagueee Chelsea ka dib markii aabaha dhalay 27 jirka reer Belgium uu sheegay in wiilkiisa uu diiday fursad uu ku kordhin lahaa qandaraaskiisa Chelsea.
Goolhayaha xulka Belgium iyo kooxda Chelsea Courtois oo 25 jir ah ayaa sidoo kale diirada u saaran kooxda Zinedine Zidane Hazard ayaana saxiixiisa cusub ee Chelsea shuruud uga dhigay Chelsea in uu saxiixo Thibaut Courtois.
Si kastaba ha ahaatee Hazard oo qandaraaskiisu Chelsea uu idlaanayo sannadka 2020 ayaa la aaminsanyahay in xagaaga soo aadan uu kamid noqon doono kooxda ka dhisan caasimada Spain ee Los Blancos oo xidigan aad u dooneysa.
Wargeyska The Mirror oo ka soo baxa England ayaa Hazard weydiiyay hadii uu saxiixi doono iyo in kale wuxuuna ku jawaabay “Haa dabcan waan saxiiixi doonaa”
“Waxaan u maleynayaa Thibaut Courtois marka hore kadibna waan saxiixi doonaa”
Hazard ayaa xili ciyaareedkan Chelsea u dhaliyay 6 gool isagoo caawiyay 2 gool ciyaaraha Premier League horyaalka England.
Xiddigii hore ee Lille ayaa 63 gool u dhaliyay Chelsea tan iyo markii uu ku soo biiray isagoo ku lug yeeshay 37 gool 192 kulan oo uu saftay Blues tan iyo markii uu yimid Stamford Bridge sannadkii 2012 isagoo kula guuleystay labo horyaal oo Premier League ah iyo mar qura oo uu kula guuleystay tartanka Europa League.